Shirweynaha Gobolka 3. la kulmay aasaaska buundada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKulanka gobolka, 3. waxay isugu yimaadeen hal-abuurka buundada
29 / 05 / 2013 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
3 oo lagu dhisi doono Boorama Istanbul. Saldhigga buundada waa guusha Istanbul 560. Bishii Maajo, 29 waxaa lagu dabaaldegay munaasabad ay ka soo qaybgaleen Madaxweyne Geelle iyo Ra'iisul Wasaare Erdogan, halka buundada cusub lagu dhawaaqay Madaxweyne Cabdullaahi Geel sida Yavuz Sultan Selim.
Saldhigga Yavuz Sultan Selim Bridge, oo ah buundada saddexaad ee lagu dhiso Istanbul, ayaa la dhigay salaadaha.
Ka dib markii uu ka hadlayey munaasabaddii furitaanka tartanka Sariyer Garipce, Madaxweyne Cabdullaahi Geele, Guddoomiyaha Baarlamaanka Cemil Cicer, Ra'iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan, Wasiirka Gaadiidka Binali Yildirim, Wasiirka Ganacsiga iyo Ganacsiga Hayati Yazıcı, Wasiirka Dhirta iyo Biyaha, Veysel Eroğlu, Wasiirka Cuntada, Beeraha iyo Xoolaha Mehdi Eker, Guddoomiyaha Istanbul Huseyin Avni Mutlu, Duqa Magaalada Istanbul Kadir Topbas iyo ka qaybgalayaasha kale ayaa yimid heerkan.
Haweenaydan ayaa ah haweeney u dhalatey Hayrünnisa Gul iyo ra'iisul wasaare Erdogan, Emine Erdogan.
Ka dib markii salaadda la akhriyo, Yavuz Sultan Selim, magaca buundada saddexaad ee uu ku dhawaaqay Madaxweyne Geelle ayaa aasaasay aasaaska. Gül, Cicero iyo Erdogan ayaa ka tageen tuubada birta tuubada oo ay ku jiraan warqadda dhismaha dhismaha iyada oo loo marayo tubbada.
Muxaadarooyin ka soo baxay ra'iisal wasaare Erdogan oo xafladda lagu qabtay:
560 Ku guuleysiga Suldaanka Ottoman, taliyayaashiisa xoogga leh iyo askartiisa quruxda badan, oo fura dhalaal dhalaalaya adoo xiraya da 'madow. Waxaan halkan kula joognaa sannad-guurada. Waxaa jira xaflado kala duwan qaybaha kala duwan ee Istanbul. Munaasabaddan, mar kale waxaan u hambalyeynayaa Suldaankii quruxda badnaa, taliyayaashii iyo askartii qabsaday Istanbul. Naftoodana naso. Fatih Sultan Mehmet Han ma ahan oo keliya magaalooyinka quruxda badan, gaar ahaan Istanbul, laakiin waxay sidoo kale soo bandhigeen maskax furitaanka jiilalka xiga.
Ottomans waxay ka tagtay farshaxanno ay ku guulaysteen qalbiga dadka ee dhammaan dalalkii ay ka jireen. Annagu, sida aabayaasheen, waxay sii wadaan inay qoraan taariikhda oo ay ka tagaan shaqada. Maanta waxaan dhignaa aasaaska mashruuc weyn. Waxaan leenahay mashruuc muhiim ah oo 7 ah oo ka sameysan buurta 7 ee Istanbul. Mid ka mid ah waa silsiladda saddexaad ee Bosphorus. Muddo daqiiqad ah, madaxweynahayagu wuxuu kuu sharxi doonaa sida layaab leh.
Iyadoo bukaan-socodkeenu aanu xiranayno silsiladda saddexaad. Mar dambe ma arki doonnaa gawaarida culus ee Istanbul. Isla mar ahaantaa, buundada ayaa yeelan doonta sifooyinka deegaanka. Waxay u eegi doontaa siyaabo aad u kala duwan.
Maanta waxaan u yihiin aasaaska xumeeyayna Waqooyiga wayn iyo buundada saddexaad, durba Istanbul, oo dhan ee Turkey, Waxaan jeclaan lahaa ugu wanaagsan dunida.
Waxaan mashruuc madani ah u soo qaadannay magaalada Istanbul, oo ah magaalo qurux badan.
Buundadan waxaa loogu talagalay ilaalinta deegaanka. Waa buundada saddexaad ka dib Bosphorus iyo Fatih Sultan Mehmet Bridges. Waxaan dhiseynaa buundada oo waxaan xirnaa silsilad saddexaad. Waxaan jeclaan lahaa ee buundada North xumeeyayna ugu wayn iyo kii saddexaad waxaa durbaba lagu waxtar u leh dunida oo dhan our Istanbul Turkey. Garoonka diyaaradaha saddexaad, oo aan dhawaanahan hirgelinnay, ayaa sidoo kale noqon doona garoon diyaaradeed oo dunidu ka hadli doonto.
Dadka qaarkood ma yaqaaniin sababta oo ah afku wuu hadlaa. Ma garanayo halka garoonka loo dhisay. Waxaan dhagaystaa telefishanka waqti ka waqti "geedo badan ayaa la gooyaa, geedo badan ayaa la jarayaa" ma garanayo meesha la sameeyo. Waxaa jira joqraafi ka baxsan dagaalka. Markii hore, waxay cuni jireen sida karraaniyada. Hadda, iyada oo la dhisayo madaarka bini'aadamka aadanaha, Madaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho maahan baahida loo qabo. Waxaan dhegeysanaa cabashooyinka sababtoo ah dib u dhac ku yimid.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo leh shan wadiiqooyin, dhismayaal casri ah oo casri ah iyo weriyeyaasha, hadda waxaan leenahay garoon diyaaradeed oo aan laga fileynin.
Turkey Waxaan nahay horumarka xoog leh hab this. Hantidan ayaa la qabtay. Horumar cusub ayaa la qabtaa. Waa heesaha Kanalİstanbul. Hadda waxay ka hadli doonaan waxyaabo badan, wayna qaylinayaan. Laakiin waxaan u baahannahay safarka wadada, waxaanu leenahay ganacsi. Dhibaatada qoyaankan quruxda badan, meeqa meelood oo cidhiidhi ah, waxaa jira dhibaato. Laakiin si adag ayaan u shaqeynay. Ma ilaawi karno sida markabkan, oo todoba bilood gubay, cabsi ka qabay Istanbul.
Ganacsigaani kuma dhamaan doono KanalIstanbul. Hadda eeg Marmaray 29 ayaa furan bisha Oktoobar. Mahad waxaa nagu ah inaan nagu dhisno. Keli keli ah, laba tube. Laga soo bilaabo halkaas, gawaarida mar kale ayay maraan. Miyaad u malaynaysaa in maskaxdooda ay maalgelinayaan? Almaza. Alsa ayaa sidaas samayn lahaa. Laakiin sanadka 10, waxaan ku haboonaaneynaa.
Tallaabo kale. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa in mugga uu u muuqdo mid yar laakiin waxaan leenahay Yaslada. Looma baahna. In Yaslıa. Waa maxay sababta? Halkaas, Menderes ayaa la diley. Laba wasiir ayaa isku mid ah. Hadda waxaan ka dhigi doonnaa jasiiradda iyo Seyriada oo dhan, iyada oo guud ahaan, jasiiradaha dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. Waxaan rajeynayaa inay jiri doonaan hudheel, waxaa jiri doona matxaf. Laakiin ma ahan kuwa ku hanjabaya xariiqda safka. Adigoo fiirinaya goobta. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaali jiray sidii xashiish ka ah magaalada Cirriga, waxaanan u noqon doonnaa xarun shirarka. Si kale haddii loo dhigo, martidadayadu waxay u iman doonaan jasiiradahan, xidhaan kulamadooda oo ka tagaan.
Waxa uu uusan dhammayn. Golden Horn. Waxaan isku diyaarineynaa hindisada cusub ee Horn Gill maalmahan. Waxaa jira waxyaabo ku saabsan Horn Gaar ah oo aan aqbalno hindiskan. Gaadiidka Taşkızak oo leh dhammaan mashaariicdan cusub iyo mashruuc aad u fiican, sida dahabiga 2,5 ee XNUMX MONTH MONTH MIXTON, waxaanu ku dabaqnay jawi-u-qaadis kaas oo Vialand's.
Ma soo saarno ereyo. Waxaan soo saaraa ganacsi. Halkan waa qof. Dhismaha Taksim ee xadiiqada gawaarida ayaa sidaas oo kale ah. Wax kasta oo aad sameyso ma jirto. Waxaan go'aanka gaadhay. Haddii aad ixtiraamayso taariikhda, marka hore u fiirso waxa taariikhda meesha lagu magacaabo park park. Waxaan halkaas ku soo celin doonaa taariikhda. Waxaan u soo bandhigneeynaa farsamooyinka aadanaha iyadoo si dhammaystiran u socota. Waqtiga xaadirka ah ee xisbiyada AK Parti, qaddarka dhirta lagu beeray kooxo da 'gaar ah waxay ku saabsan yihiin bilyan doolar, oo ay ka mid yihiin sabuurada ka weyn kooxda da'da 10 iyo kooxda da'da 5. Dhirtaasi waxay ku beeri doonaan awooddan. Ilaa iyo inta ay dadkeennu u soo jiidanayaan geedo beerto ah, ha u muujiyaan meel bannaan oo geedo ay ku jiraan.
Waqtigaan, gaadiidka magaalooyinka ee magaalada Istanbul wuxuu gaarayaa 3.5 million. Buundooyinkayagu waxay ku siman yihiin awoodda dabaqada 2.5, waqtiga loo marayo Bosphorus waa 1. 3 in Istanbul. Kuwa ka soo horjeeda dhismaha buundooyinka wax talo ah kama bixiyaan si looga hortago khasaarahaas. Sidaa daraadeed, ma sameyno oo ha u qaadanno hababkan aan horey loo arag. Waxaan isku dayi doonaa in la dhiso mustaqbalka Turkiga. Waxaan qorsheynay habka mashruuca iyada oo la ilaalinayo kaymaha iyo balliyada hore. Marka mashruuca la dhammeeyo, waxaanu samayn doonaa rekoor caalami ah. Buundadaasi waxay tusaale u noqon doontaa adduunka oo dhan, wax walbana waan ku faani doonaa.
Ra'iisul Wasaaraha Erdogan, ka dib markii wadahadal afka ah lala yeeshay shirkadda qandaraaska, ayaa dhulka la wareegay 29 May 2015, mid ka mid ah wakiilada shirkadaha qandaraas-bixiyeyaasha taariikhda dhammaystirka mashruuca.
Ka dib markii uu hadal ka jeediyay Guddoomiyaha Golaha Guud ee Qaranka Cemil Cicek, oo qaatay riyadii ka dib ra'iisal wasaaraha:
Waxaan jeclaan lahaa in adeegyadani faa'iido u yeesho qof walba. Qiimaha mashruucan waxaa loo qoondeeyey siddeed bilyan oo doolar. Ilaa shalay, waddankan ma helin 3.5 Milyan Dollar. Turgut Özal oo la soo dhaafay ayaa lacagtan ku garaacay albaabada dadka ajnabiga ah. Turkey kharash gareeya 1 billion dollars mashruuc kaliya ee meesha maanta ay tahay. Haddii aan dammaanad mustaqbalka Turkey ayaa ku soo qofna ma maalgelinta, kuwaas oo, si mashaariic kuwan waxaa lagu keenay nolosha mustaqbalka dhalaalaya ee dalka. Waxaan rajeynayaa in sanadka soo socda waxaa lagu qarashgareyn doonaa mashaariicda waaweyn ee gobolka Turkey nolosha. Dowladda Turkiga waxaa la karbaashidda argagixisada muddo dheer ka qabashada ahayd Ujeedada ugu weyn ee argagixisada waa in ay ku riday dhagaxa hore ee noocan oo kale ah mashruuca. Sidaa darteed, Turkiga waa in ay mustaqbalka eegto mustaqbalka iyada oo rajeyneysa inaanan u oggolaan ciyaarahaas.
Ugu dambeyntii, hadalka ahaa Madaxweyne Cabdullaahi Geel:
Marti sharafta leh, asxaabteyda aan jeclahay, muwaadiniinteyda qaaliga ah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xafladdan ku joogo maalintaas farxad.
Maanta waa sannad-guuradii guul-darradii Istanbul. Waxaan xusuusannaa Fatih Sultan Mehmet naxariis leh. Wuxuu noo dhiibay magaaladan. Magaaladani ma aha oo kaliya isha Istanbul. Istanbul waa indhaha caalamka oo dhan. Mid ka mid ah magaalooyinka dhif ah ee adduunka. Waa magaalo weyn oo ah caasimadda saddexaad ee boqortooyooyinka waaweyn. Sidaa daraadeed, waa ilaha farxad noo ah dhamaanteen inaynu qaadno oo u adeegno mas'uuliyadda magaalada. Nasiib wanaag, dalkeena ayaa tegey maalmood aadka u madow ee Turkey. Waan ku faraxsanahay Turkey.
Maanta waxaan halkan ku soo uruurinay munaasabadda qabashada aasaas weyn. Istanbul ayaa goobjoog ka ahayd dhacdooyin badan oo weyn taariikhdeeda. Dhab ahaantii, waxaa jiray shirar badan oo muhiim ah. Waxaan hubaa in xafladda furitaanka ee buundada saddexaad mar walba lagu xasuusto xusuus muhiim ah.
Buundada Koowaad, sida aad ogtahay, waxay ku dhejisaa magaca Ataturk. Sanduuqii labaad wuxuu ku dhajiyaa magaca Fatih Sultan Mehmet oo ku biiray Istanbul oo hadiyad nagu siisay. Waxaan hubaa in buundada saddexaad ay ku jirto qof walba maskaxda. Waxaan la yaabanahay magaca magaca buundada. Muddo ka hor, ra'iisul wasaare qadarin ah ayaa calaamadeeyay in aan ka dhigi doono bayaankan.
Saaxiibadeena, dawladdeena, marwalba waxaan u maleyneynay in aan soo gabagabeynay. U ogolow magaca Bridge ee Saddexaad inuu yahay Yavuz Sultan Selim Bridge.
La tukaday salaadda aasaasiga ah
Kadib markii uu hadalka madaxweynaha, aasaaskii Bridge ee Yavuz Sultan Selim Bridge ayaa la dhigay.
Shirka Waddanka ayaa la kulmi doona furitaanka Ankara-Istanbul YHT Line
Dakhliga labada buunde waa Tunka Eurasian iyo 3. damaanad qaadin buundada
3. Ku rakibida buundada
3. qeylo kale ayaa yimid buundada
3. aasaaska buundada
Gudoomiyaha Istanbul Hüseyin Avni Mutlu
Wasaaradda Ganacsiga iyo Ganacsiga Hayati Yazıcı
Veysel Eroğlu, Wasiirka Dhirirka iyo Biyaha
Guddoomiyaha Baarlamaanka Cemil Cicek
Tababaraha ayaa ku dhacay USA
TCDD ayaa cusboonaysiisay gawaarida Kars